कसरी जोगाउने ल्यापटपको ब्याट्री ? ब्याट्री जोगाउने उपाय जान्नु उपयोगी हुन्छ
ramkrishna January 23, 2021	कसरी जोगाउने ल्यापटपको ब्याट्री ?
ल्यापटपको ब्याट्री जोगाउने उपाय जान्नु सबैका लागि उपयोगी हुन्छ । विद्युत अभावको बेला ल्यापटपमा ब्याट्री पुगेन वा सकियो भने समस्या हुन्छ । ब्याट्री जोगाउन निम्न उपाय अपनाउनु पर्छ :
ल्यापटप जतिधेरै तातिन्छ त्यति चाँडै ब्याट्री सकिन्छ र ब्याट्रीको आयू पनि घट्छ । त्यसकारण ल्यापटपको तलको भागमा प्रशस्त हावाको आवतजावत हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
Previous Previous post: ल्यापटप कसरी चलाउने ? ल्यापटपलाई आवश्यक पर्ने, नभैनहुने सफटवेयरहरू
Next Next post: भोक लागे पछी मात्र खाने कि समय-समयमा खाने ? जान्नुहोस्